Tabaha loogu talagalay WhatsApp si loo cuno xogta moobiilka oo yar | Androidsis
WhatsApp waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan waxaana adeegsada dadka isticmaala Android. Barnaamijyada farriinta sidan oo kale waxay u muuqdaan inay yihiin xogta ugu badan ee moobilka gaajaysan. Nasiib wanaag, waxaan haynaa tabaha qaarkood oo noo oggolaan doona inaan yareyno isticmaalka xogta inta aan isticmaaleyno arjiga. Sidaa darteed, haddii aad leedahay xaddid xadidan, uma baahnid inaad wax badan ka walwasho isticmaalka dalabka.
Intaa waxaa dheer, codsiyada kale waxaan sidoo kale haysannaa suurtagalnimada adeegsiga habka keydinta xogta, sida gudaha Facebook o Instagram. Laakiin maanta waxaan diiradda saaraynaa khiyaamadan si loo keydiyo isticmaalka xogta ee WhatsApp. Dhammaantood waa kuwo aad u fudud, kaliya ku habee dhinacyada qaar barnaamijka laftiisa.
1 Wax ka beddel tayada wicitaanada
2 Ka dajiso soo degsashada otomaatiga ah xogta moobiilka
3 Dejinta kaabta
3.1 Casharrada kale ee xiisaha leh:
Wax ka beddel tayada wicitaanada
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aan ku samayn karno barnaamijka ayaa ah wax ka beddel tayada wicitaannada isla. Si tan loo sameeyo, marka dalabku ka furmo taleefanka, waxaan gujineynaa saddexda qodob ee toosan ee ku yaal qeybta midig ee kore ee shaashadda. Xulashada ka muuqata shaashadda, waxaan gashanaa goobaha arjiga.
Gudaha WhatsApp waxaan galnaa qeybta xogta iyo keydinta. Waxay ku jirtaa qaybtaan halka aan ka helno shaqooyinka tilmaamaya isticmaalka xogta ku jirta arjiga. Markaa waa halka aan ku awoodi doonno inaan ku qaabeyno dhinacyo badan qaab fudud. Markaan galno qaybtaan, waxaan eegeynaa salka shaashadda.
Halkaas waxaan ka helnaa ikhtiyaar la yiraahdo "Yaraynta isticmaalka xogta", oo ku xigta sanduuq aan ka fiirsan karno. Sida caadiga ah waa la hubiyaa, sidaa darteed waxa ay tahay inaan sameyno waa uncheck. Sidan oo kale, isticmaalka xogta waa la dhimi doonaa, in kastoo tayada wicitaanada ay ka sii xumaan doonto. Laakiin haddii aadan adeegsan qaabkan, wax dhibaato ah ma lahan doontid markaa.
Ka dajiso soo degsashada otomaatiga ah xogta moobiilka
Marka labaad, khiyaano kale oo fudud oo aan ku keydin karno xaddiga xogteena marka aan isticmaaleyno WhatsApp, waa in la joojiyo soo degsashada otomaatiga ah ee leh macluumaadka moobiilka. Sida caadiga ah, markay noo soo diraan sawir, fiidiyo ama feyl ku jira barnaamijka farriimaha, waxaan leenahay hawsha inaan si otomaatig ah ugu soo dejino taleefanka. Laakiin tani waa wax aan si fudud wax uga beddeli karno.
Mar labaad, waxaan ku bilaabaynaa adigoo gujinaya saddexda qodob ee toosan xagga sare ka dibna aan xulanno xulashada dejinta, oo ka mid ah kuwa ka muuqda liiskaas. Marka aan ku jirno goobaha codsiyada, waxaan galnaa qaybta xogta iyo keydinta. Maaddaama ay tahay meesha aad ku habeyn kartid dhammaan dhinacyadan isticmaalka macluumaadka u gaarka ah ee dalabka.
Gudaha waxaan helnaa qayb loo yaqaan Automatic download. Waxaan xiiseyneynaa qeybtiisa ugu horreysa, taas oo ay u badan tahay inay ku xiran tahay xogta moobiilka. Ka dib waxaan gujineynaa qaybta la yiri. Markaad sidaas sameyso waxay daaqad cusub u furaysaa xulashooyin kala duwan (sawirro, fiidiyoow, maqal, dukumiintiyo). Waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah inaan wada hubino. Ka dibna waxaan siineynaa inaan aqbalno.
Maxaa dhacaya markaan sidan yeelno? Waxaan u sheegeynaa arjiga in markii aan kuxiran nahay heerkayaga xogta, si toos ah ha u soo degsan mid ka mid ah faylasha aad noo soo dirto. Sidaa darteed, xogta lama cuni doono marka mid ka mid ah xiriiradayada uu noo soo diro faylka barnaamijka. Sidaa darteed, waxaan sidoo kale dooran karnaa waxa aan dooneyno inaan soo dejino haddii ay wax noo soo diraan. Waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud wax ugu keydinno xaddiga xogteena, marka lagu daro inaan awood u leenahay inaan ka xulanno wax walba oo xiriiradayada ay noo soo diraan barnaamijka.
Ugu dambeyntiina, xeelad kale oo aan u adeegsan karno waa inaan ku sameyno xoogaa hagaajin ah oo ku jira keydka arjiga. Si tan loo sameeyo, waxaan galnaa WhatsApp oo waxaan mar kale riixnaa saddexda qodob ee toosan ee ka muuqda qeybta kore ee midig ee shaashadda. Marka aan ku jirno goobaha, waxaan galeynaa qeybta Wadahadalka. Halkan waxaan sidoo kale ku haysannaa xulashooyin aan wax ka beddeli karno si aan ugu kaydinno xogta barnaamijka dirista.
Qeybtaan gudaheeda waxaan galnaa keyd. Sida caadiga ah, dalabku wuxuu nuqulo ka sameeyaa koontadaada Google Drive, haddii ay wax dhacaan, marwalba waad soo kaban kartaa wadahadalladii aad soo qabatay. In kasta oo nuqulladani ay cunaan qayb ka mid ah khidmadda xogta isticmaalaha. Markaan ku dhex jirno qaybta keydka, waa inaan hoos ugu dhaadhacnaa salka.
Halkaas waxaan ka helnaa qayb loo yaqaan "badbaadin adoo isticmaalaya". Waxaan ku gujineynaa waxayna na siin doontaa suurtagalnimada inaan ku dooranno sida aan u dooneyno inaan ku keydinno nuquladan keydka ah ee WhatsApp. Talada lagu keydinayo xogta ayaa ah inaan doorano kaliya WiFi. Sidan oo kale, kaydinta ayaa la samayn doonaa markaad ku xidhan tahay shabakad WiFi kaliya ah.
Waxaan sidoo kale wax ka beddeli karnaa inta jeer iyaga lagu sameeyo, laakiin tani mar horeba waa wax ikhtiyaari ah, oo adiga kugu xidhan. Maaddaama ay jiri doonaan isticmaaleyaal doonaya inay nuqullo ka sameeyaan si joogto ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo sameeyo WhatsApp isticmaalka xogta moobilka yar